Ukuvavanya iSokkia SET 630RK iyonke iSitishi-iGeofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/Ukuvavanya iSokkia Isitishi esipheleleyo SET 630RK
GPS / IzixhoboUkuprinta kokuqalaTopography
Ndandisanda kuqala ukubona lo mzekelo, ekupheleni kwinyanga ndiyathemba ukwenza uqeqesho olusemthethweni ukwenzela ukuba oogqirha bakwazi evangelicen kwiindaba zayo. Kuze kube ngoku sasiyisebenzise Set520K, endithe ndathetha ngaphambili.
Siza kunika iworkshop ekupheleni kukaMeyi 2010, nokuba kuseHonduras okanye e-El Salvador. Ukuba umntu ukwindalo kwaye ufuna ukubhalisa, baya kwamkeleka.
Ukuba awukwazi ukulungiselela loo mhla, akufuneki ukuba ushiye umyalezo, kuba siceba ukwenza enye emva koko.
Kuthetha ntoni i R?
Ndivela ndingakhange ndibonakalise, oko kuthetha ukuba ungathatha ufundo olufana ne-EDM kwaye unganyanzelisi usebenzise iprism. Oku kuyenzeka kakhulu, kuba emsebenzini ocwangciswe kakuhle kunokwenzeka ukugcina omnye wabagcini-bethonte, anditsho zombini kuba umntu kufuneka asincede silayishe i-tripod. Kwi uphononongo lwesigqeba Umsebenzi we-Urban okanye ubunjineli, ukukwazi ukuhlawula izinto ezikhoyo kukho inzuzo enkulu.
Kuthetha ukuthini na?
Ivela yezitshixo, okanye into ebizwa ngokuba yibhodi yezitshixo eyandisiweyo. Ileta ihanjiswa zizo zonke iikhompyuter ukuba ikhibhodi ngaphandle kwamaqhosha omsebenzi osisiseko sele ebandakanya iphaneli eyongezelelweyo yamanani kwaye ikwasebenza ukufaka iileta. Ngokuqinisekileyo, le Set 630RK iza nebhodi yezitshixo kwelinye icala, ngokungafaniyo ne-520K, nangona oochwephetsha bendixelela ukuba ababoni luncedo kwikhibhodi emibini ngaphandle kokuba baqeqeshwa.
Utshintsho lwelo mzekelo:
Umahluko phakathi kweqela lokuqala nelesibini (phakathi kwabanye) ngu-3, ​​nto leyo ethetha ukuba yi-3R laser onokuyifumana ngayo ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-350 ngaphandle kweprism ukuya kuthi ga kuma-800 ngeminiprism. Ngelixa enye iklasi eyi-2 laser, ukubonakalisa ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-200 akukho nto iyenye. Oku kubalulekile ukuphucula ukuchaneka, ixesha lokubamba kwimowudi ekhawulezayo, nangona kunjalo ndicebisa ukuba ujonge itafile izitishi ezipheleleyo ndibonise ngenye ixesha.
Esi sixhobo (Series 3) kuthiwa somelele ngakumbi kwinqanaba lezixhobo, nangona ukuphuculwa kwinqanaba lesoftware kubonakala ngakumbi, ngakumbi kwimitha yomgama. I-laser ine-pointer ecokisekileyo, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ikwazi ukuthatha amanqaku ngokuchaneka njengomphetho wesibonda, ikona yodonga, nokuba kukho imiqobo ngaphambili enjengocingo okanye ityholo. Le iconography ilandelayo ibonisa ukusebenza okuziswa zezi zixhobo, endiza kuthi ndizicacise ubuncinci ezimbini:
Ukukhutshwa ngamacandelo amabini, jonga ukuba kwimeko yokuthatha inqaku kwikona yendlu (C), intonga ethambekileyo ingabekwa, bonisa ukuba siza kuthatha indawo ngamanqaku amabini (A no-B) kwaye singene umgama phakathi kwala manqaku mabini siwaziyo ikhuni lokuhamba. Yiyo loo nto izixhobo zibona indawo u-C.
Ukubala kwendawoEsi sixhobo sinakho ukuya kuthi ga kwi-50 ye-3D yokulungelelanisa, ukubala indawo. Oku kunomdla, kwimeko yemilinganiselo ye-radial okanye xa sifuna ukuba nombono wommandla othathwe ngaphambi kokufika kwikhabhinethi khuphela kwaye udwebe i-polygon.
Oko kuyakuxhomekeka kumhambisi wasekhaya, njengereferensi endiye ndadibana nayo kwiFroogle, kwaye ixabiso elibonakala kum lisondele kwi- US $ 7,000. Kodwa xa ndicofa kwikhonkco ndifumana ixabiso eliphezulu, ngaphandle kokubandakanya izixhobo.
I-Sokkia inabasasazi bayo kwilizwe ngalinye, kodwa ngokunyuka kwintengiso ye-Intanethi, ububodwa buyaphela. Ngokoluvo lwam, ngeepali ezimbini, iiprism ezimbini kunye ne-tripod, fanele uhamba ngeenxa zonke apho, beka kwisikhululo seenqwelomoya. Kule nto kufuneka kongezwe iindleko zokukhutshwa kwamasiko (mhlawumbi malunga ne- $ 150) kunye nerhafu yokuthengisa, kuxhomekeke kwilizwe.
Ukuyithenga kwi-Intanethi kunye nomthengisi ongagunyaziswanga, ukuhlawula iindleko zokuhambisa ngenqanawa, njalo njalo akunjalo. Iphela ibiza kakhulu kwaye iwaranti inzima. Izixhobo ezisetyenzisiweyo lilotto elihlala liphela kakubi.
Umthengisi wasekhaya kufanele ukuba abe kolo luhlu lwamaxabiso, mhlawumbi ukuya kuthi ga kwi-8,000 yeedola. Kwimeko yokuba babodwa, amaxabiso abo aya kuba phezulu kuba akukho khuphiswano. Ngenxa yoko kukho (kakuhle, akukho zininzi ngaphandle koko) abahambisa iimpahla ezithengisayo kwinqanaba lommandla, ngaphandle kwamazwe abo apho babemele khona, nazo zonke iziqinisekiso zomthetho kunye namaxabiso amaninzi okukhuphisana.
Incwadana ye ukusetyenziswa kwesi sitishi esipheleleyo Yayilungiswa nguLeopoldo Hernández kunye neqela lakhe.
UMarcelo Paturalski uthi:
Abanye bangandinceda ngesikhululo set630rk sisonke.
Ndifumene ixesha elincinci kakhulu kwaye ndinobunzima bokumakisha okanye i-gabarito com ela, umsebenzi wamakhonkco amabini okwenziwa ukuze andise loo mgca kwaye angamaki uphawu lwe-gabarito okanye i-ponto dessa extensão.
ukhona umntu onikwe amandla ??
I-svp izimvo zitshintsha i-langue d'une station sokkia et topcon
Israel benedito maia uthi:
IMINHA ESTAÇÃO IYABONAKALA UM E97, AMANQAKU OKANYE INGXAKI, MAIS ESSE ERRO SO IJONGA NA PRIMEIRA FEZ YOKUTHI IMAS, IDIPOIS NAO IVELE IMAY, IQHELEKILE NGOKUQHELEKILEYO. IMPENDULO YE-AGUARDO. WAMKELEKILE
UBERNARD PIERRE uthi:
Iinguqu zengxelo ziguqule i-language station ye-sokkia 510 ye-Chineseis au francais ou englais
kuba kwinqanaba elilinganiselweyo xa lilinganisa iphuzu ndifumana i-E90 kwaye alilingani
NdineSitishi Sokkia SET 630RK; kwaye kufuneka ndisebenze i-oset, kuba ayiniki iidridi, kwaye ndifuna uncedo, indlela yokwenza ngayo.
alirio vasquez uthi:
Ndine-sokkia yesitishi esicwangcisiweyo ibeka i-650rx impazamo yam (i-E024) kwaye ayifunde imida, ukuba ndifunda iindile ezingenanto kunye nezitshi. Yintoni endiyenzayo ukuze ndiphelise olo hlobo lwesiphene engakhange lucacise kulo mbhalo kwaye ungayichazi kuyo? umntu unokundinceda nceda, siyabonga!
Andikayiboni indawo ekwi-Intanethi ebonisa indlela yokwenza oko. Into elungileyo ukuyenza kukujonga kumthengisi weso sixhobo kwilizwe lakho.
NDIWO IIMBINI EZIMBINI ZI-630RK
BUZA NJANI UKUHLAZIYA I-SOFTWARE YANGAPHAKATHI OKANYE APHO NDIFUMANA IZIPHUMO ZOKUFAKA UKUFAKA OKANYE IFOMU
MTHANDA UNCEDO UNCEDO
Sawu, ndingathanda umntu ukuba anditshele ntoni okwenzekayo xa isitishi samanani sokkia 530 indixelela i-E191 okwenzekayo xa kwenzeka
Sawubona, mva mva.
Ndifuna umvavanyi, i-sokkia 630 okanye i-sokkiacx105 imodeli kukuthumela ngaphandle kwe-Spain. Kuya kufuneka ungxame, iibhetri ezimbini ezinemilenze emithathu.
José Antonio Bran. uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba nabo bathengisa izixhobo zokungcebeleka, ndifuna ikhibhodi epheleleyo kwisikhululo se-630r.
logan cross uthi:
I-650rx ingadluliselwa ukusuka kulwimi
CARLOS SUAREZ uthi:
Andres Mogollon uthi:
ukuba ukwazi ukutshintsha indlela yolwimi kwisitishi esithile sokkia 550X
JAVIER TZONI ROJAS uthi:
Sawubona, mva mva, umbuzo wam: Ndingayitshintsha njani isikrini kwisiSpanish seesitishi sam esipheleleyo? I-SOKKIA SETHELE 630 RK3 kwangaphambili ndiyanibulela kakhulu ngenkxaso yakho.
JUAN MANUEL LOZANO RODRIUEZ uthi:
NDIFUNA UMSEBENZI WASE650RX, NGENZEKA KANJANI NGENDAWO NGANJE ESIPANISHINI
JORGE GALINDO uthi:
UKUFUMA ISICWANGCISO SOKUPHATHA KWE-STATION NGOKUBA ISISHWANKATHELO ESIKHONA
Ndingayitshintsha njani ulwimi kwikhutshana ye-sokkia 630rk?
UHUGO ALFONSO GOMEZ UTHIXO uthi:
Ndisifumana njani isikhululo senqwelomoya sokkia set 630 rk ngeSpanish.
Ewe, kukho izinto ezininzi zokubona apho:
1. Ukuba iadaptha yeza neCD xa uthenga iadaptha, kufuneka ufake umqhubi.
2. Ukuba akunjalo, kwaye kuba une Windows 7, kufanele ukuba iyiPlagi kunye nokudlala.
3. Kufuneka uqinisekise ukuba izibuko lichanekile; oko kwenziwa nge:
Qala, iphaneli yokulawula, iNkqubo kwaye apho ukhetha umphathi wesixhobo.
Jonga phantsi kweZibuko (i-LPT kunye ne-COM) enye ethi: I-USB eqhubekekayo kwi-Serial Comm
Khetha kuseto oluphambili, kwaye uqiniseke ukuba isantya sokudlulisa sikwi-33600 bps kunye nenombolo ye-port ye-COM
Oku kufanele kusebenze, ngamanye amaxesha kuya kufuneka ucofe ekunene izibuko kwaye ukhethe ukukhangela utshintsho. Nangona kunjalo, ukuba yiPlagi kunye nokuDlala, utshintsho kufuneka lwamkelwe kwangoko.
Ndineziko elipheleleyo le-sokkia set610. uthenge intambo edibanisa i-serial ukuya kwi-vga ukuxhuma ikhompyutha kwisikhululo. Into enjalo, akayandi. kunceda ukulahla idatha yam inkqubo ye windows 7
Hlola oku kukhonkco, epapashwe nguGalileo Topography.
Apho bachaza indlela yokuqwalasela amachweba.
I-1 COM Serial port kufuneka ibe kwizinga lokutshintshwa kwe-33600 bps
Le ngxaki eqhelekileyo, kungekhona iphoso likaSokkia kodwa yeWindows kuba ukuphathwa kweechwep kwii-laptops kuvame ukulwa, ngokungafani nedesktop.
Andiyazi ukuba umntu uye wakwazi ukuyicombulula.
I-Rk entsha izisa ikhadi le-SD, eliqeda le ngxaki yokukhutshelwa ngekhebula.
RICHARD ZAMBRANA uthi:
Mna isikhululo iyonke Sokkia etho, kwaye intsonkothile data ukulayisha yam laptop kunye window 7 apho kuya kubakho ethile umqhubi okanye indlela ethile ukwenzela data avela kunzima kakhulu kum zonke ixesha emsebenzini ukuya esixekweni alahlekelwe data Ndiyayixabisa nayiphi na ingcaciso. richard
Molo Carlos. Ukukuphendula, kuya kufuneka utsho ukuba ukweliphi ilizwe.
UCarlos Ramirez Ramirez uthi:
Ndingathanda ukwazi apho ndingaya khona ukuze ndifumane umyalezo womsebenzisi wesiteli esipheleleyo sokkia, umzekelo 630rk.de ngaphambi kokuba ndibulele ngesandla
Ayisiyombono imbi leyo. Izixhobo zentengiso zentengiso eMexico zonganyelwe ngabantu, kodwa ukuthengiswa koqeqesho, inkxaso, ukulungiswa kunye neenkonzo zokulinganisa yinto ebanzi enganikwanga ngabambalwa abayenzayo.
Leyo yingxaki eqhelekileyo. Ngokubanzi, kwenzeka kwiimeko ezimbini:
1. Kungenxa yokuba intambo ye-USB ayidluliseli idatha kuphela kodwa namandla, kwaye yiyo loo nto kulula kakhulu ukuba izibuko lonakaliswe okanye inqanawa enokuthi izise isixhobo sentambo yoqhagamshelo. Kuya kusoloko kuyimfuneko ukubona ukuba kunokwenzeka ukuba intambo yonakele, izama komnye umatshini.
Kwimeko yeetayitile zokuxhuma, kuba ziphela idluliselo lweedatha, azibonisi lolu hlobo lweengxaki.
2. Esinye isizathu kungenxa yokuba izibuko le-USB kulula kakhulu ukungena kwiingxabano, kuba zininzi, ziye zavela kwiimodeli zokudlulisa ezahlukeneyo kwaye ngohlobo ngalunye lweWindows ziba nzima. Ngesi sizathu, ungquzulwano luhlala luhamba koomatshini abaneWindows Vista okanye iiWindows 7.
Injongo kukuba isebenze ukukhuphela kwiikhompyutheni kunye ne-Windows XP endala, ingasetyenziswanga kwi-Win7.
Ndiyaxolisa andinakwenza ngaphezulu kokuchaza ingxaki kuwe. Kuhleli ukusebenzisa i-desktop ye-PC yokukhuphela njengoko ii-laptops ezintsha zingasekho kwizibuko le-serial. Kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba kunokwenzeka nokuba uphulukane nomsebenzi ngenxa yokungakwazi ukukhuphela idatha, kungcono ukubuyela kwingcinezelo yePC, ungathenga intambo ye-serial okanye uqhubeke nokusebenzisa iWindows XP.
Amancio SULCA QUISPE uthi:
Molo sithandwa sam, jonga ngoku ndikwisikhululo esipheleleyo SASEMZANTSI 320NTS… KODWA INGXAKI kukuba andinakukwazi ukukhuphela idata ibe yiphepha .. KUBONAKALA UKUBA AYIYIBONI IKHWABHULA LE-USB… LIYAMKELA KUPHELA IZIBUKO (NEEMBO) UKUBA KUPHELA KWIZIXHOBO ZEEKHOMPYUTHA ENDALA ... UKUBA UNOKUNDINCEDA ... OKANYE UThumele KUM ...
NDINGUMFUNDI WEZOKUJONGA… AYACUCHO-PERÚ
Mhlonishwa uMnu Nkosi:
Njani wena? Ngaba lakho ishishini lilungile ngoku?
Ndingummeli waseLatin waseNingizimu Afrika we-SURVEY COMPANY.
Inkampani yethu inikezelwe kwimveliso yokuvelisa kunye nokuthumela izinto kunye nezinto zokusebenza zezobugcisa.
Iwebsite yenkampani yethu kuku: http://www.southinstrument.es/
Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi ukuba unomngabaza okanye unzima.
Ndinenkxalabo yokuba ndiqale kulondolozo lwezixhobo zokwenza uphando kodwa andazi ukuba ngubani endinokuqhagamshelana naye, ngoku ndinenkampani encinci ezinikezele kwiinkonzo zokuhlola kunye neeprojekthi zobunjineli, kodwa ndinomnqweno wokwandisa ngombono ukubonelela ngenkonzo endiyibona iyimfuneko eCancun Quintana Roo, eMexico.
Ndiyathemba ukuba ungandikhokela ... enkosi kakhulu.